Millennials sy ara-poko Fampihavanana — Trip LEE - OFISIALY SITE
Raha Izaho no mieritreritra izany mangatsiatsiaka sy mahagaga, Tsy mihevitra izany ho toy manaitra toy ny sasany manao izany ho. Isan'andro misy fampisehoana toy izao manerana ny firenena. Tsy misy na inona na inona izay tsy manam-paharoa ny fahazoana samy hafa ny olona mba hanangona. Izany no mitranga ny fotoana rehetra amin'ny fampisehoana, na ara-panatanjahantena, sns. Raha misy mpanakanto na ny fanatanjahan-tena ekipa no ivon'ny saina, ny olona any no misy hiangona araka ny tia ny mozika na ny ekipa. Ireo olona dia tsy tena mila miray. Tsy dia tena manana izy ireo hahavita izany. Izy ireo fotsiny mba handefitra samy nandritra ny roa ora.
Izany no tsy ny karazana firaisan-tsaina sy fampihavanana izay izahay rehefa. Izany karazana firaisan-tsaina dia tsy maharitra. Tsy mamokatra na inona na inona. Ireo olona tsy tena manompo ny hafa. Ary tsy tena manondro ny voninahitr'i Kristy sy ny Filazantsarany Toy izany koa.
Ny karazana miray saina izahay rehefa kokoa sy maharitra kokoa substantial- be fitiavana kokoa.
Ny karazana miray saina izahay, rehefa tsy azo vokatry ny mahazatra fotsiny, na ara-kolontsaina mozika mahaliana. Ny karazana miray saina izahay, rehefa afaka ihany novokarin'ny ny Filazantsara 'i Jesoa.
Ary ny mazava ho azy no antony isika dia miresaka momba ny Filazantsara sy ny fampihavanana ara-poko, Tsy fotsiny ny fampihavanana ara-poko.
Diniho ireo teny ireo avy John 11:
... Dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena, ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ho iray ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko.
Izany ny karazana firaisan-tsaina izahay, rehefa:olona izay maro lasa rehetra sy maro karazana iray.
Ny tanjona farany dia tsy nahazo mainty sy ny fotsy hoditra ao amin 'ny efitrano. Jay-Z afaka manao izany. Ny tanjontsika dia ny hitory ny fiadanana sy firaisan-tsaina fa efa tanteraka i Jesosy, ka dia niantso ny olona tao amin'ilay. Tiantsika ny olona mba mankafy ny fahafenoan'ny tany, ary torio izany na aiza na aiza izy ireo handeha. Ary tiantsika ny ho an'ny taranaka rehetra. Fa izany ihany no tonga amin'ny alalan'ny ny Filazantsara.
Transition: Ny taranaka arivo taona dia mazava ho azy ireo izay teraka tany am-piandohan'ny taona 80 ny taona 2000. ary izahay (millennials) tsara tamin'izany voalohany, mora kokoa karazana firaisana. Ahoana anefa ny momba izany lalina, Mitana kokoa, ary sarotra kokoa ny karazana firaisana?
Raha toa ianao ka arivotaona tahaka ahy, dia tiako ianareo mba handinika ny fomba ahafahantsika manohy ny hiady ho fampihavanana. Ary raha tsy ny Arivo Taona (antsoina ianao antitra), dia angamba afaka mahita ny fomba hiantso millennials izany fahitana lehibe ara-baiboly. Izay mandeha ny mpitandrina, mambran'ny fiangonana, ray aman-dreny, namana, sns.
Misy olana ny mieritreritra ny fampihavanana ara-poko sy ity taranaka ity. Tsy mora ny hiantso ny olona roa mba hihavana sy mba hampaherezana azy ireo mba hiantso ny hafa ho toy izany koa. Ireto misy telo miavaka sakana Mino aho fa ananantsika ao niantso millennials ity:
1. Misy mihevitra millennials fihenjanana ara-poko dia ny dadabe sy bebeny olana.
Mazava ho azy fa zavatra hafa mihitsy izao eto amin'ity firenena ity noho izy ireo indray mandeha. Raibeko efa nilaza tamiko ny tantara fa tsy mahazo mino,raiko nanao hetsi-panoherana nandritra ny zo sivily hetsika, aman-dreniko ahy tantara milaza ny mahatsiaro ho nandà hotely efitra toy ny child.Those dia tsy tena ny zavatra niainana. Fanavakavahana ara-dalàna intsony ny zava-misy. Ary zavatra efa niova.
Noho izany, maro amintsika no mihevitra fa toy izany ianao amin'ny fotoana hafa tanteraka, izay mahatonga ny fifandraisana hazakazaka manan-danja intsony ny resaka. Mpiangaly rap iray nanao hoe:, "Tsy misy fanavakavahana amin'ny Internet. Fanavakavahana ihany no teo-izany angamba tahaka ny dimy taranaka lasa izay ... fanavakavahana dia ho-tiako tsy hoe taranaka. Eny, toy ny dimy taranaka lasa izay. Fanavakavahana efa over. Izany ny olona antitra izay foana mitana ny azy ... "
Izao no mieritreritra millennials maro .... "Izahay ankehitriny, ao amin'ny fiaraha-monina ara-poko lahatsoratra-. Maro ny volon-koditra ny fanambadiana eo amin'ny taranaka. Ary mazava ho azy manao manana filoham-pirenena mainty hoditra. Izany rehetra tamin'ny lasa. "
Mampalahelo fa, ny sasany fandinihana vao haingana dia nampiseho fa millennials no manome bebe kokoa tendro-molotra fotsiny ny fitoviana noho ny lasa taranaka, fa izahay mbola ankapobeny toy ny fitsarana an-tendrony toy ny ray aman-dreniny. Na izany aza, dia mieritreritra izahay Lahatsoratra-ara-poko, izay mampidi-doza mitambatra.
Mazava ho azy, zava-nitranga vao haingana na dia toy ny mpanavakavaka hiaka eo amin'ny Oklahoma firahalahiana mampiseho fa ny fanavakavahana dia velona tokoa ao amin'ny taranaka. fa mampalahelo, raha tsy izany fa miharihary, isika mandà ny fisiany.
Fitsarana an-tendrony ara-poko matetika saro-takarina kokoa, nefa tsy midika izany tsy mpanota. Izany dia midika fotsiny fa sneaky kokoa noho ny teo aloha. Ary izay afaka manao izany mamitaka hiady.
2. Misy mihevitra millennials haino aman-jery sosialy ny asa atao dia ampy.
Haino aman-jery sosialy dia tsy mampino fanomezana. Izahay efa nahita mihitsy aza haino aman-jery sosialy fanamby sy hanetsehana ny olona ao amin'ny fahazavana ny vao haingana ny olana ara-poko ao amin'ny U.S. Fa ny taranaka mety tafalatsaka mora foana ao amin'ny fandriky ny mieritreritra fa ampy ny mizara zavatra tsara fotsiny tao amin'ny haino aman-jery sosialy. Ny olona sasany miantso izany miraviravy-tivism:ny bitsika ireo mafana fo, mpitory 'Quotes, ary lahatsoratra blaogy momba ireo raharaha, ary ny mijanona any.
Izany no tsy ampy! Manana ny tena hanao zavatra mihoatra noho izay. Miresaka momba izany na dia eo anivon'ny aterineto na ny namana tena tsara, saingy tsy ampy. Ary manana haino aman-jery sosialy namana amin'ny foko hafa sy ny kolontsaina tsara, fa tena tsy ampy.
3. Millennials sasany tsy mihevitra fa ny Tenin'Andriamanitra dia ampy amin'ny androntsika.
Fa ny Kristianina Arivo Taona, isika dia miaina ao anatin'ny andro izay ny Baiboly, dia tsy hajaina araka ny indray mandeha i. Ary noho izany, amin 'ny matoky ao amin'ny Baiboly no fihenan'ny. In Dr. King andron'i, ny olona namaly ny fahamarinana ara-baiboly, fa tsy amin'ny antsika. Izany mpizara. Izy ireo milaza fa ny zavatra tena ilaintsika, dia hafa, manavaka kokoa hafatra. Ary inona no hafatra tokony hanao tena fiovana misy Ay?
Tsy mila bebe kokoa Gospel Christian fanambarana, Aoka hatao maro. Ho azy ireo, rehetra ilaintsika dia nanomba asa kristianina fitoriana ny Evanjely raha toa ka tsy ny asa. Tena mila isika mihoatra noho ny fitoriana, fa tsy afaka niala fitoriana ny Filazantsara, na isika Ho ihany no mazava ny karazana vetivety firaisan-tsaina aho, niresaka momba ambony.
tsara, ireo dia telo vato misakana atrehintsika Heveriko amin'ny fiantsoana millennials ny fampihavanana ara-poko. Noho izany, dia inona no hataontsika? Raha mpitarika ny Fiangonana na ny mpikambana ao amin'ny fiangonana, na ray aman-dreny mihitsy aza, ahoana no hiresaka izany eo amin'ny fiainan'ny 'ny taranaka?
Ireto misy telo vahaolana tsotra. Mihevitra aho fa ireo tsirairay adiresy telo eo ambony olana. Ary ny tena zavatra dia te-hanery an-trano dia hoe ny Filazantsara ihany no mamokatra ny karazana firaisan-tsaina izahay, rehefa.
vahaolana #1: Torio ny Filazantsara ny Fampihavanana
Fantatro fa toa hita, saingy zava-dehibe loatra ho Nihevitra ka nijery ny.
Aho vao nifindra tany Atlanta mba hanampy hamboly fiangonana vaovao, fa raha tsy mbola izany aho tamin'ny mpiasa tao amin'ny fiangonana any D.C. ary ny mpikambana tany nandritra ny efa-taona. Nandritra ny fotoana any, Hitako ny fiangonana mitombo izaitsizy amin'ny fahasamihafana, ary izany dia ny mahita zavatra tsara tarehy. Nisy bebe kokoa ny mainty mpikambana, Shinoa mpikambana, be taona mpikambana, ary tanora mpikambana. Tena lehibe ny mijery batisa izay nisy adala io fahasamihafana teo amin'ny vahoaka Andriamanitra fahavaratra.
Tsy tonga lafatra ny fahasamihafana, saingy tsara tarehy. Ary Mihevitra aho fa nitranga, satria ny fiangonana dia tsy nandany ny ankamaroan'ny fotoana ny miresaka momba ny fampihavanana ara-poko, fa satria nandany ny ankamaroan'ny fotoana ny miresaka momba ny tena hafatra fampihavanana.
Nahoana no fahasamihafana hitranga?
Hoy i Jesosy ao amin'ny Jaona 12:
Fa Izaho, raha asandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra ho atỳ amiko
Hoy i Jesosy rehefa nanandratra ny, izany hoe rehefa ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, dia mety hitaona ny olona rehetra ho Azy. Tsy hoe misy karazana olona, fa ny olona rehetra. Tsy manavakavaka eto. Raha ny Apôstôly Jaona dia mampiasa ny teny hoe "rehetra,"Tsy midika rehetra ny olona iray, fa ny olon-drehetra vondrona. Fotsiny ny Isiraely, fa hafa rehetra hafa firenena sy. Andriamanitra nahary ny hafa firenena, ary Jesosy dia maty mba hanatona samihafa firenena ho Azy.
Izany no fo ny resaka eto. Ny zavatra izay mampisaraka antsika dia ota. Ny fototry ny fanavakavahana sy ny fifanenjanana ara-poko sy ara-poko fisarahana dia ota. Ary i Kristy no efa nanao ny ota ho faty kapoka ho an'ny olona rehetra. Tsy maintsy manambara izany hafatra.
Raha tsy izany, Ho isika mandany ny fotoanantsika miezaka ny mamorona hafa karazana ny firaisan-tsaina, fa tsy manaiky ny firaisan-tsaina i Jesosy dia efa namorona. fanambarana 5 hoy i Jesosy, "... Nividy ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny foko, teny, olona, ary ny firenena rehetra. "Izany no drafitr'Andriamanitra teny ampandehanana, ary mahazo hilaza izany!
Manontany tena aho raha toa ianao no miantehitra amin'ny izay hafatra eny amin'ny fanompoana. Izany ny voalohany indrindra fitaovam-piadiana.
Filazantsara mandeha be ny firaisan-tsaina lalina noho maro amintsika hahatsapa. In Efesianina 4, Miresaka momba izany i Paoly lalina ny firaisan-tsaina. Mariho ny fotoana rehetra dia mampiasa ny teny "iray ihany."
Iray ny tena ary iray ny Fanahy, toy ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray izay an'ny ny antso-iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady Rain'izy rehetra, Izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Efesianina 4:4-6
Izany be lalina noho ny firaisan-tsaina hafa isika dia zatra. Ary ny filazantsara dia ilaina mba hampihavana antsika, fa fomba lalina.
Isika ihany millennials Mila ny Filazantsara ny olona hafa rehetra manao. Ary mahatonga ny tena firaisan-tsaina. Noho izany, Aoka ny hanohy matoky azy sy manambara izany, na dia ny kolontsaina no tsy te hihaino izany. Ao amin'ny kolontsaina midadasika kokoa, dia te-hahita lalàna, ary te-hahita ny rariny. Fa aoka isika tsy hanadino ny zavatra ny Mpitsara ny olona rehetra dia efa nanolotra nidina.
Ny Filazantsara ihany no afaka mamorona izany karazana firaisana. Ok, ka inona no vahaolana hafa dia misy marina any an-dafin'i fanambarana?
vahaolana #2: Hiady ho Gospel fitiavana sy ny fahatakaran-javatra
Izahay tena rehetra tsara ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 13.
Jereo ny Jaona 13:34-35. "Didy vaovao no omeko anareo: Mifankatia. Tahaka ny nitiavako anareo, no tsy maintsy mifankatia. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia. "
Fa inona no dikan'izany, ary inona no tena mitovy? Io fitiavana io dia miresaka momba ny eto dia masina ho an'ny olona tia sy tsy tia tena fanoloran-tena ny tsara. Tokony hanana fa masina tia ny hafa. Tokony ho nataony ho samy hafa ny tsara. Tokony haniry ny hafa hahafantatra an'i Kristy bebe kokoa, mitombo bebe kokoa, ary ny hiroborobo. Rehetra ananantsika fifandraisana amin'ny hafa dia tokony ho miavaka amin'ny fitiavana.
Anefa i Jesosy hoe tsy fotsiny hifankatiavanareo; dia mamaritra ny fomba tokony hifankatia. ny fomba: Toy ny nitiavany antsika. Wow! Dia tonga malahelo ho antsika, Niaritra ny mpanota izao tontolo izao ho antsika, ary nametraka ny ainy teo ho antsika. Ary Izy dia milaza fa tokony mifankatia Toy izany koa. Ary izany no olona ho fantatrareo fa izahay dia ny mpianany.
Io fitiavana ny hafa avy amin'ny tenan'olombelona tena fomba maro. Ary ny sisa amin'ny Testamenta Vaovao mametraka kely, fa ny nofo amin'ny zavatra izany fitiavana toa.
Galatianina 6:2 – Mifampitondrà izay enta-mavesatra
Efesianina 4:32 – Aoka hangoraka ny hafa
Filipianina 2:13 – Diniho tsara kokoa noho ianao ny hafa
Hebreo 3:13 – hifampahery isan'andro
James 5:16 – hivavaka ho an'ny hafa
1 Peter 3:8 – Ny fitiavana toy ny rahalahy
Izany no tena fitiavana.
Aza odiana tsy re ampahany amin'ny hoe iza aho
Ity ny zavatra, raha isika dia handeha hifankatia, tsy maintsy mahafantatra ny tsirairay. Tsy maintsy mahatakatra ny tsirairay. Ahoana no hitondra ny enta-mavesatry ny rahalahiko, raha tsy mahalala izay enta-mavesatra dia? Ahoana no ahafahako ho fangoraham-po ho anareo, raha tsy mahalala ny fanerena izay hilanja anao? Ny fahatakarana ny tsirairay dia manampy antsika hifankatia koa. (Avereno)
"Tsy dia hahita anareo ho toy mainty."
Roa taona lasa izay, Aho hoe miresaka mivantana akaiky namako izay nitranga mba ho white.We dia manana fitiavan-drahalahy mushy karazana fotoana. Ary hoy izy tamiko, "Ho ahy, ianao namako fotsiny Trip. Tsy dia hahita anareo ho toy mainty. "Ankehitriny dia mankasitraka izay niezaka ny hiresaka amiko. Dia tsy handeha ho tia ahy izay tsy noho ny hafa namany. Fa tany an-dafin'i, Mihevitra aho fa izany no fomba iray unhelpful mba hijery ny hafa. Ho tahaka ahy hoe: ny anankiray ny tokan-tena namana, "Fantatrareo fotsiny aho hahita anareo ho toy Johnny. Tsy dia jereonareo fa ianao tokan-tena. "Tsara, dia tokan-tena. Ary maro ny tolona, faniriana, ary ny zava-tsarotra handeha manana zavatra ifandraisany amin'ny zava-misy fa ny tokan-tena.
Ary izany no nampirisika ny namana tsy hieritreritra momba ny fahamaintisan'ny indrindra isaky ny niresaka tamin'izy me- fa tsy mody toy izany tsy misy. Satria, Ary tsy hisy fiantraikany ny fiainako.
1. Satria mainty aho. Tiako ho mainty. Ary Andriamanitra nanao ahy toy izao.
2. Misy traikefa miavaka tokoa izy, satria mainty, na ny maha-mpianatra, na reny, na maha-mpitovo.
My mainty traikefa
Ny sasany amintsika tsy hieritreritra be momba ny foko eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary izany no tsara. Fa misy olon-kafa avy amintsika izay manao. Ary izaho ihany no miteny ny tenako sy ny mainty traikefa. Tsy afaka miteny ho an'ny rehetra.
Misy fanampiny enta-mavesatra izay, ary maro ny olona mainty hoditra, tsy maintsy mitondra. Isika mitondra ny enta-mavesatra mampahory ny mahalala ny tantara eto amin'ny firenentsika: fa ny mainty hoditra dia tsy nihevitra ny olona feno, fa ny sasany amin'ireo tarehimarika eo amin'ny vola Nanana mainty hoditra toy ny fananana, Mbola misy mahalala fanavakavahana, ary ny maha-mpandray ny fanavakavaham-bolonkoditra izany indraindray.
Ny fahafantarana izany manova ny fomba tia olona.
Maro ny zavatra fotoana efa Nihevitra ny momba ahy(izay tsy marina) fotsiny mifototra amin'ny tarehiny. maro ny toe-javatra, Izany dia midika hoe efa noheveriny fa ny heloka bevava aho whenI tsy ho avy izany bebe kokoa. Maro ny toe-javatra izany ny efa noheveriny fa moana aho, ary tsy nahita fianarana. Maro ny toe-javatra izany ny efa noheveriny fa aho ny fotsy ambany noho ny namanao, na izay aho tsy ho tsara. Ary ny olona izay mihevitra fa efa nanao azy mazava ho ahy. Tsy lazaina intsony ny olona manondro ny olon-tiana amin'ny fomba dratsy. Toy ny mandre ny olona hoe:, "Ny rahavavy dia kinda tarehy, ho mainty ankizivavy tiako ho lazaina. "Toy ny hoe tsy mainty dia tsara tarehy. Misy lamina izany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainan'ny maro. Aho tsy maintsy manana lahateny amin'ny zanako, tahaka ny raiko nanao tamiko, nampitandrina azy mba ho tsara ary fa misy ny olona izay tsy tia azy fotsiny satria ny mainty. Ary dia fanampiny enta-mavesatra izay tsy maintsy hitondra.
Nahoana no zava-nitranga izany?
Fa nahoana no manao izany zavatra izany? Nahoana aho no milaza anareo rehetra izany? Noho izany didy mba hifankatia. Tahaka tia ny mamanao amin'ny fomba tsy manam-paharoa, ary ny anti-panahy, na latsaka-vintana ny olona, tokony ho tia samihafa foko amin'ny fomba tsy manan-tsahala. Manana fifaliana tsy manam-paharoa, enta-mavesatra, sy ny zavatra niainana, ary afaka tsy tia ny hafa manala tsara raha tsy manam-paharoa, na tsy miraharaha ny zavatra niainany.
Tsaroako aho miresaka amin'ny anabavy Shinoa izay manatevin-daharana ny fiangonana. Efa afa-tsy teto amin'ny fanjakana ho fohy ny fotoana ananany, ary rehefa niresaka momba ny zavatra niainany tamin'ny toriteny, dia nanazava ny fomba efa sarotra izany ho azy ny manaraka. Izaho tsy ho nieritreritra lalina momba izany fa raha tsy izany. Izany nanova tanteraka ny fomba nijery ny zava-nitranga ny rahavavy tahaka azy eo amin'ny fiangonana, Ary nanampy ahy ny mieritreritra tsara kokoa momba ny fomba ny ho tia azy ireo.
Ny Filazantsara ihany no afaka mamokatra izany karazana sorona fitiavana. Noho izany, tokony hiverina amin'i Jesosy mba hiasa azy ao amintsika. Ho mafy, izay mitondra ahy ny teboka farany.
vahaolana #3: Aza mihevitra mora
Fahasamihafana mampiseho ny hatsaran-tarehy sy ny fahamarinan 'ny Filazantsara. Raha misy olona manatona ny fiangonana, ary izy ireo mahita ny fahasamihafana-ny karazana samihafa tsy mahita eo amin'izao tontolo izao-dia manome azy hahita sombiny amin 'ny voninahitry ny Filazantsara. Soratra Masina milaza na iza na iza miantso ny anaran'i Jehovah no hovonjena-tsy iray vondron'olona-ary izany tsara tarehy rehefa afaka izany ho aseho ao amin'ny vatana eo an-toerana.
Fahasamihafana manao zavatra mafy
Fahasamihafana dia zavatra tsara tarehy; saingy tsy mora. Fiangonana rehetra-na dia ny olona avy amin 'ny foko iray ihany, taona, background- dia manana olana satria mpanota izahay. Saingy isan-karazany dia afaka hahatonga ny olana manokana. Isika rehetra mitondra antsika manokana fiaviana, traikefa, presuppositions, mifanavakavaka, sy ny entana miaraka aminay. Ary indraindray izay miteraka ady.
Soratra Masina dia tsy mahalala izany ady. Na dia tany am-piandohan'ny fiangonana, nisy fisaraham-bazana ara-poko manerana tsipika (araka izay voarakitra ao amin'ny Asan'ny Apostoly). Noho izany, satria dia ho mafy, Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy sendra ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny ireo olana:
Soso-kevitra azo ampiharina ho an'ny Fampihavanana ara-poko
1. Aza hitondra ny olona izay tsy mitovy loatra amin'ny fomba hafa.
Ny fahasamihafana dia tsy Kilonga. Katsaho ny hahatakatra, fa mbola mifandray amin'izy ireo ara-dalàna. Afaka mieritreritra ny fotoana fony aho niverina tany Philly, raha ny mpampianatra dia miresaka amiko foana amin'ny fomba hafa. Izy dia hiarahaba mpianatra hafa amin'ny, "Salama,"na, "Tsara ny mahita anao." Fa izy no hahita ahy, ary tampoka teo dia ataovy hoe, "Inona ny alika?"Na" Inona no mitranga ny olona?"
Afaka efa Fantatr'i ny fahasamihafana nefa tsy hahatsapa ho toy ny tsy maintsy hiresaka amiko amin'ny fomba hafa.
2. Aza mihevitra fijery.
foko, taona vondrona, sns. natao ny ny olona. Ny olona tsy mitovy ny zavatra niainana. Fitsaratsaram-poana sasany dia mahatsikaiky sy tsy mampidi-doza, fa ny hafa no manafintohina. Fantaro tsirairay amin'ny maha-olona.
3. Miezaha fotsiny tsy mirohotra ny olona izay mijery tahaka anao.
Manao fanahy iniana ny fifandraisana amin'ny olona izay tsy mitovy anao. Miadia ihany ny fakam-panahy mba mandany fotoana miaraka amin'ny olona tatsy tianao indrindra ho azy hifandray amin'ny. Rehefa avy am-piangonana, minia miresaka amin'ny olona tsy mitovy. Tsy toy ny asa, fa noho izy ho fanomezana ho any ny tena toy ireo olona izay tahaka anao.
4. Fanahy iniana mikatsaka ny hahatakatra ny olona.
Mandehana lalina relationally. Mametraha fanontaniana. Mihainoa tsara ary hangoraka amin'ny olona tsy manam-paharoa zavatra niainana. Na dia resy lahatra ianao ny zavatra misy milaza, alohan'ny nandefa azy io, mihaino azy ireo sy mikatsaka ny hahatakatra
5. Mahareta amin'ny alalan'ny zava-tsarotra sy tsy mitsaha-mitombo fanaintainana.
Fahasamihafana Sarotra, indrindra rehefa manomboka miresaka momba ny hazakazaka / foko. Misy resaka dia afaka mahazo henjana. Mamindrà fo amin'ny hafa. Foana mihevitra ny tsara indrindra fa tsy ny ratsy indrindra. Raha misy olona mikatsaka ny hahatakatra anao manafintohina anao, mamindrà fo sy manam-paharetana amin'izy ireo. Miezaka izy ireo zareo. Aza mandany ka ataovy mihitsy ny olona mba hahazo sy hahatakatra kokoa. Tena roa-dalana eny an-dalana.
Rehefa mitady ny hahatakatra olona, aza matahotra ny hametraka fanontaniana, na milaza zavatra tsy mety. Tokony hifidy tsara ny teny, fa ianao tsy maintsy mampidi-doza ary manantena ny rahalahy sy anabavy mba hamindra fo.
Aza kivy raha sarotra. Izay mitondra any fotsiny fa tsy handefitra samihafa tafaray fahasamihafana.
6. Manontania tena raha tombantombana momba ny foko hafa / taona / aman-toekarena vondrona.
Izay no fanontaniana tokony ho nanontany ny tenantsika rehetra. Asa mba hieritreritra bebe kokoa ara-Baiboly / somary. Tokony ho nanontany ny fomba mieritreritra momba ny olona izay hafa noho isika, anisan'izany ny kolontsaina samy hafa, ary teratany. Inona no tonga ao an-tsaina rehefa nitranga olona eny an-dalambe? Inona no tonga ao an-tsaina rehefa mahita azy ao amin'ny fivarotana? Tokony hanontany tena isika ka miezaka mba hahita olona ny fijerin'Andriamanitra azy ireo.
7. Tandremo ny resaka mandeha.
Izany dia tokony ho iray amin'ny maro ny miresaka. Tsy misy fomba feno ny fifanakalozan-kevitra. Izany dia natao mba manomboka fifanakalozan-kevitra hafa. Firaisan-tsaina eo Anivon'ny Tsy Fitoviana dia tsy hitranga ny loza. Ary raha tsy miresaka momba izany, dia tsy ho saina sy miasa mankany azy. Share olana sy ny tolona, fa ny asa mba hahazoana antoka ianao miresaka izany amin'ny fangoraham-po, fahatsapana, fahasoavana, sy ny fitiavana.
Raha tsy miresaka momba izany, isika hihazakazaka ho any amin'ny loza ateraky ny fanohizana ny mihevitra fa ity olana ity dia efa nataonareo tamin'ny tamin'ny lasa. Ary rehefa misy olana, fa izahay tsy mahalala, fa toy ny herinaratra olana ao an-tranonao. Afaka hifoha indray andro ny afo! Mila mahafantatra ampy hiady tsara.
8. Saintsaino ny soratra masina ka mangataha amin'ny Tompo no hanome anao ny fitiavany ho an'ny firaisan-kina.
Firaisan-tsaina dia tena olana, dia tokony hivavaka isika fa Andriamanitra dia mitombo ny fitiavany azy io. Isika dia nandidy ny dia miray saina. Isika dia nandidy ny mahatsapa ny zava-misy fa ny iray izahay ao amin'i Kristy. Tsy ny foto-kevitra no namorona. Jereo Efesianina 4. Jereo ny Global fampanantenana tamin'i Abrahama ao amin'ny Genesisy. Jereo ny fomba rehetra mifarana amin'ny Apokalypsy. Ka mangataha amin'ny Tompo no hanome anareo fitiavana izany karazana firaisana.
saingy, rehefa efa nilaza fotoana maro efa, ny Filazantsara ihany no afaka mamokatra izany karazana fitiavana sy ny firaisan-tsaina sorona.
Asehoy The World
Tiantsika ny asa hametraka izany amin'ny fampisehoana Filazantsara ho an'izao tontolo izao mba hijery.
Ao anatin'ny vanim-potoana sy ny fotoana toa fivakisan'ny kokoa noho ny hatramin'izay, ny Tompo dia afaka mampiasa izany. Ny Tenin'Andriamanitra dia ampy. Ary ny vahoakan'Andriamanitra dia toy ny fanoharana ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga ny Teniny tani-hay. Iray Mampiasa mba hanao ny Filazantsarany hamirapiratra mamirapiratra.
Tsy ny mainty sy ny fotsy hoditra fotsiny ao amin 'ny efitrano, fa ny mainty sy ny fotsy hoditra ao amin 'ny fianakaviana.
fa lalina, truer firaisan-tsaina.
Michael • Aprily 9, 2015 amin'ny 11:47 aho • navalin'i
Some excellent thoughts here. Fotsy aho, but went to high school and played football with nearly all black guys. Noho izany, I was definitely in the minority at my high school (and by far in the locker-room). Growing up in the Arkansas-Missisippi Delta, race tensions were (and still are) right on the surface. You constantly hear negative comments from both sides about the other. Mampalahelo. What’s tough is being ostracized by your own race for trying to reach out to the opposite race. I have seen first hand how racism can rear it’s ugly head within the church. It’s awful. I am thankful for guys like you, Trip, who are willing to try and confront these issues from a gospel-based perspective. We are called to love our brother, no matter what skin color our brother happens to be. I long for the day that multi-racial churches exist across the Delta. saingy, the only way we will get there is by seeking to live out the gospel on a daily basis and being truly intentional about it.
Robin • Aprily 9, 2015 amin'ny 3:12 PM • navalin'i
“Tsy ny mainty sy ny fotsy hoditra fotsiny ao amin 'ny efitrano, but blacks and whites in the same family.” AMEN!
KwasiAgbottah • Aprily 9, 2015 amin'ny 3:23 PM • navalin'i
So good. So needed. So helpful. I will apply these things. Misaotra.
Rolfstlund • Aprily 10, 2015 amin'ny 6:47 aho • navalin'i
Damien • Aprily 30, 2015 amin'ny 4:28 PM • navalin'i
Otis • Jona 27, 2015 amin'ny 8:39 aho • navalin'i
பெயர் • Desambra 14, 2016 amin'ny 3:39 aho • navalin'i
Lacey • Mey 14, 2017 amin'ny 10:13 aho • navalin'i
Mwiza • Janoary 1, 2017 amin'ny 2:51 PM • navalin'i
Great Teaching Trip. Tiako izany. (Zambia)
Olivia • Jona 18, 2018 amin'ny 12:32 aho • navalin'i